Akụkọ - Nsogbu ndị ekwesiri izere na imepụta kilim lime na gburugburu ebe obibi
Nsogbu ndi ekwesiri izere n'ime mmeputa ahihia nke eji eme ka gburugburu ebe obibi
1) Okwute limestone ahụ buru oke ibu: usoro ịgba ume nke limestone na-adabere na okpomọkụ nke nha nke kọntaktị lime na elu nke nzu. Na oke okpomọkụ, ọnụọgụ nke ịkọ limestone na-adabere na nha nke limestone ahụ.Ọ bụrụ na ọ na-ebuwanye ibu ahụ, ọ ga-eme ka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na ntụ oyi nke lime dị obere karịa nke limestone, ọ na-esiri ya ike karị Okpomoku a na-abanye na nkume dika okpukpu nke okpukpu wayo na - abawanye, na ngwa ngwa nke calcination na - ebelata. Ya mere, nnukwu okwute nke limestone na - enwe sandwichi, nke bu isi ihe kpatara nzu nzu. wayo kiln kwesịrị ịchịkwa na 40-80mm, na nha nke kiln ahụ nwere ike iru ala na 50-150mm.
2) Obere nke mmanụ ọkụ ma ọ bụ uru mmanụ ọkụ dị ala: oke ruru mmanụ ọkụ ọkụ gburugburu ebe obibi metụtara arụmọrụ teknụzụ nke lime ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, kol a na-eji ọkụ lime na-ere ọkụ n’ebe ọkụ na-adị larịị ọfụma na gburugburu ya agbadatala n’arọ * 125. N'ozuzu, uru bara uru nke ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na gburugburu ebe obibi bụ ihe karịrị 5500 kcal.Ekwesịrị ịchịkwa akụkụ ahụ nke mmanụ ọkụ, ma tinye mmiri mgbe a na-eji kol.
3) Enweghi ikuku na-enweghị ezi uche: nchebe gburugburu ebe obibi na mmeghachi omume iji mepụta lime nkume na-adabere na mmanụ ọkụ na-ere ọkụ ọkụ ọkụ, na ọkụ ọkụ na-achọ ikuku oxygen (ikuku), ọkụ ọkụ ọ bụla kwesịrị inwe ọnọdụ atọ dị mkpa maka mmanụ ọkụ, oxygen, ọkụ ọkụ na-esi na mbara ala onwe ha. , na ọ bụ ifufe ifufe na ọkụ, ọkụ na mgbakwunye na unyi na nkume nzu na ụfọdụ hà ruru isonyere, ezi uche n'ihi na ifufe na-egosi karịsịa dị mkpa, gburugburu ebe obibi-echebe kiln ngalaba na mpaghara ikuku olu nwere obere obere, ikuku na-eku ebe ọkụ ọkụ zuru oke, ọnọdụ dị elu dị elu, ikuku ikuku na-ere ọkụ na-ezughị ezu, nzaghachi na-ezighi ezi, ihe nzuzu ShengShao. Ngalaba nke gburugburu-enyi na enyi-wayo kiln stably na evenly, na mmanụ ụgbọala nwere ike nsure evenly. al wayo n'ekwú gburugburu ebe obibi-echebe ala arụpụtaghị na mmepụta site wayo arụsi ọrụ ike ruo n'ókè na-kpatara na-enweghị ezi uche ikuku eruba nkesa na oku, na eruba nkesa abụghị ihe ezi uche na-egosipụta ntụpọ na Ọdịdị nke kọmputa ịme anwansị cowl, m ụlọ ọrụ tụnyere technology, site na ngwanrọ kọmpụta kọmpụta iji kọwaa mgbanwe nke ubi na-asọpụta gburugburu mkpuchi, nyocha nsonaazụ nnwale a chọtara n'elu mkpuchi ikuku "mpaghara ndị nwụrụ anwụ". Site na ịtọpu ikuku ikuku pụrụ iche n'elu mkpuchi ahụ, a na-emepe ikuku ikuku elu ma "mpaghara nwụrụ anwụ" nke ikuku na-ekpochapụ, iji zere ihe ọkụ ọkụ nke sitere na mmiri etiti. Mgbe mgbanwe nkpuchi mkpuchi ahụ, nkesa ikuku na lime lime bụ karịa, na ọrụ lime nke mkpuchi ahụ na-abawanye site na 15% jiri ya tụnyere ọrụ lime a na-agbanweghị agbanwe.
4) Na-ere ọkụ: ogo ngwa ngwa, n'otu aka ịlele ọdịnaya nke calcium oxide, magnesium oxide, n'aka nke ọzọ iji hụ ọnụego overburning nke ngwa ngwa, ọkụ ọkụ bụ akụkụ nke limestone anaghị emebi kpamkpam, overburning bụ calcination nke limestone, nke mere na ngwa ọkụ ọkụ, nke a makwaara dị ka wayo ọkụ ma ọ bụ lime nwụrụ anwụ. ọkụ na-ere ọkụ dị oke oke, ogologo oge, mgbape elu ma ọ bụ shea iko, oke shrinkage pụtara ìhè, agba gbara ọkụ n'ime oji, ikike mgbochi mụbara. Ihe kpatara ịmị ọkụ: buru ụzọ tụlee ma oke mmanụ ọkụ buru oke ibu, ekwesịrị ịhazigharị ya ka o nwee ezi uche Akụrụngwa, kol na-agwakọta ọnụ kwesịrị ịtụle nke kol kpamkpam, na mgbakwunye iji dozie ikuku kwesịrị ekwesị.Rotation bụ ikpe iji dozie njikwa kol na mmanụ ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi n na-eme ndokwa na isi usoro nke edo, multipoint rotary feeder nwere ike na-aghọta otu mgbe, multi-ebe, na-atụ ma laa azu Nchaji ọrụ, nke nwere ike ịchịkwa ikpe ihe onwunwe eruba, ndepụta ọnụego, mmanụ ụgbọala ákwà evenly, mee mmanụ ụgbọala edo na n'ụzọ zuru ezu weere na akụrụngwa, combus.
Post oge: Mee-25-2020
Calcium Hydroxide Ime, Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium oxide na Calcium hydroxide,